मन मिल्ने केटा साथीको खोजीमा छु ! इच्छा हुनेले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला ! – News543Online
मन मिल्ने केटा साथीको खोजीमा छु ! इच्छा हुनेले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला !
June 10, 2021 adminLeaveaComment on मन मिल्ने केटा साथीको खोजीमा छु ! इच्छा हुनेले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला !
तपाईको कुनैपनि सम्बन्धलाई दिगो र सफल बनाउँन सबैभन्दा पहिले तपाईमा बिश्वास हुनु पर्दछ । सधै सकारात्मक सोच पनि हुनु पर्दछ । तरपनि यहाँ दैनिक लाखौं सम्बन्धमा बिभिन्न समस्याहरु आइरहेका छन् । कहि न कही चुकिरहेका छन् । भत्किरहेका छन् त टुटिरहेका छन् ।
उ सँग बिस्तारै सबै कुरा खोल्दै जानुहोस । आफ्नो जोडीसँग लुकाएर राख्नु आफ्नो जोडीको लागि नोक्शानदायक हुन सक्नेछ। खासगरीकन कुनै यस्तो कुरा जुन तपाईले आफ्नो पार्टनरलाई बताउँनु भएन भने र यदि उसलाई कहि कतैबाट थाहा पाए।आफ्नो कुरा राख्नेको मौका दिनुहोस् हरेक कोई चाहन्छन् कि उ आफ्नो कुरा खुलेर भन्न सकोस् । अनि अर्कोले उस्को कुरालाई लिएर प्रतिकृया दिओस ।आफ्नो साथीको उसको कुरा राख्नको लागि पूरा मौका देओस् र जब उ आफ्नो कुरा राखिरहेको छ भने पनि वीच विचमा विना रोकटोक ध्यान दिएर सुनिरहनुस्। सफल सम्बन्धको यहि पहिचान हो कि पार्टनरलाई थाहा होस् कि उसले कहिले बोल्नु पर्छ र उसले आफूलाई रोक्नुपर्छ
आधा सांसद घटाऔं, बचेको पैसाले सिमानामा प’र्खाल लगाऔं ….ठिक कि बेठीक ? सहमत हुनेले मात्रै सेयर गरौ
देखेर पनि नदेखे जस्तो नगर्नु होला देवघाटमा रेबिजले ४ वटा गाई म रे?